स्वरोजगारमुखी रणनीति अपनाउँदै भवगतीमाई गाउँपालिका – Sky News Nepal
स्वरोजगारमुखी रणनीति अपनाउँदै भवगतीमाई गाउँपालिका
१९ श्रावण २०७७, सोमबार १७:२६ मा प्रकाशित
स्काई न्यूज / साउन १९,सुर्खेत ।
दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमै विभिन्न खालका स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्न थालेको छ । कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०को प्रतिकुल अवस्थाका कारण रोजगारी गुमाई गाउँ भित्रिएका र गाउँमै भएका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजागारीमा समेट्ने उद्देश्यका साथ स्वरोजगारमुखी रणनीति अपनाउन थालेको हो ।युवालाई श्रममा जोड्न सके गाउँको पैसा गाउँमै रहने भएकाले पालिकाका हरेक गतिवधिलाई रोजगारसँग जोडेर उत्पादनका गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकाले बताएको छ ।प्रायः स्थानीय सरकारले विकासको नाममा डोजरको प्रयोग गरेर जथाभावी खन्दा विकासको नाममा विनाश भइरहेको छ । तर, भगवतीमाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ‘श्रम रोजागर बैंक’ स्थापना गरेर ७ ओटै वडाका १४० जना युवालाई समावेश गरेको थियो । जहाँ महिला र पुरुषलाई समान तरीकाले समावेश गराइएको गाउँपालिकाले बताएको छ ।
बीमासहितको रोजागारी पाएपछि ढुक्क !
गाउँपालिकाले ‘श्रम रोजगार बैंक’ मार्फत मजदुरका लागि बीमासहितको रोजागरीको व्यवस्थापन गरेपछि स्थानीय दंग छन् । ‘साँच्चै सिंहदरबारको अनुभूति हामीले अहिले पाउँदैछौं’, भगवतीमाई–४ तुर्सुकी स्थानीय चन्द्रा अधिकारीले भनिन् । अहिले पालिकाले बीमासहितको रोजगारी दिएपछि श्रीमानको भरमा पर्नु नपरेको उनले सुनाइन् । महिलाहरू घरभत्रिको काम मात्र निर्भर रहने भएकाले महिलाहरू पुरुषको कमाइमा भर पर्नु पथ्र्यो’, उनले भनिन्, ‘बिहान घरको काम गरेर दिनमा रोजगारी पाएका छौं । हामीलाई यो निक्कै ठूलो कुरा प्राप्त भएको छ ।’यस्तै सोही वडाका मदन विक पहिला पहिला रोजगारीका लागि कालापहाड जाने गरेका थिए । तर, अहिले पालिकाले श्रम रोजगार कार्यक्रम ल्याएपछि उनी पनि गाउँमै रोजगारी गरिरहेका छन् । ‘हाम्रा लागि त शौभाग्य भन्नुपर्छ । कालापहाड जाँदा वर्षको एकचोटी दशैंतिहारमा घर आइन्थ्यो, अहिले परिवारसँगै सधैं रमाउन रयतै कमाउन पनि पाएका छौं’, उनले भने ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले प्रतिव्यक्ति रू. १० लाख बीमांकको दरले बीमा गरिएको बताए । बीमासहितको व्यवस्थापन भएपछि उनीहरूले कार्यविधिमा रहेर इस्टिमेट अनुसार काम गर्ने गरेको उनले बताए । गएको वर्ष रू. २ करोड बराबरको विभिन्न योजनाहरूको कामको प्रगति राम्रो भएको अध्यक्ष थापाले बताए । मजदुरले प्रतिदिन ज्याला रू. ६१० पाउँछन् । गत वर्ष प्रभावकारी बनेको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्थानीयले नै माग गरेपछि निरनतरता दिइएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । कार्यक्रममार्फत उपभोक्ता समितिको भन्दा पक्का र गुणस्तरको काम भइरहेको पनि गाउँपालिकाले बताएको छ । गएको वर्षमा विद्यालयका भवन, विभिन्न ठाउँमा सडक, चर्पी, ग्याभिन पर्खाललगायत कामहरू गरिएको थियो ।